Tag Archives: Xasan Gurguurte
10-kii September 2012 –waxaa markii ugu horaysay Magaalada Muqdisho lagu doortay Madaxwayne Xasan Sheikh Max’uud oo ka mid ahaa Bulshada Rayidka, waxa uuna Raii’sul wasaare u magacaabay Saacid Faarax Shirdoon waxayna ahaayeen labo nin oo aad isugu dhow marka loo eego Madaxdii iyaga ka horeeyey, waxaana sanad ka dib soo shaac baxay Khilaafkooda iyadoo Madaxwaynaha ay hore uga soo yeertay “intii aan eersani lahaa nin la ii keenay waxaan eersanayaa nin aan aqaano” waxaana dhacday in Baarlamaanku meesha ka saaro Ra’iisul Wasaare Saacid kadib markay u dulqaadan waayeen Khilaafkooda
2-dii December ayey ahayd markii Codka Kalsoonida Baarlamaanka uu ku waayey Raiisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Farax Shidoon waxaana Gudoomiyaha Baarlamaankaa oo ku dhawaaqyey Natiijadii Cod bixintu yiri “249 xildhibaan ay codkooda dhiibteen. Waxaana in xukuumadda kalsoonida lagala laabto u codeeyey 184 xildhibaan, halka ay 64 xildhibaan codkoooda siiyeen xukuumadda, mana jirto cid ka aamustay. Sannnad ka dib wuxuu ku dhawaaqey Natiijadii Codbinta ee Raiisul Wasaare Cabdiweli Shiikh Axmed wuxuuna yiri “153 Xildhibaan ayaa Codka Kalsoonida kala laabatey Raisul wasaaraha Soomaaliya waxaa diidey 80 Xildhibaan waxaa ka aamusey 2 Xildhibaan “ sidaa darteed waxaan Madaxweynaha ka codsaneynaa in muddo bil ah soo magacabo Ra’iisul Wasaare Cusub
Waa Raiisul Wasaarihii Labaad oo muddo Sannad ah la rido sababatoo ah 2-dii December 2013 ayuu Saacid waayey Codka kalsoonida halka Cabdiweli uu waayey 6 December 2014 waa December to December marka Su’aasha waxay tahay maxaa la filan karaa December-ta soo socota ee 2015, Madaxweyne Xasan Shiikh waxaa uu Xilka hayaa muddo Laba sanno waxaa uu magacabey laba Ra’iisul Wasaare , ma waxaa uu barbaro la noqon doonaa Madaxweynayaashii ka horeeyey sida Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Shiikh Shariif Shiikh Axmed oo magacaabey min Saddex Ra’iisul Wasaare mise waxaa uu jabin doonaa Rikoorka u yaala soo Magacaabista Ra’iisul Wasaaryaasha Soomaaliya.
Midka mid ah xildhibaanada taageersan Ra’iisalwasaare Cabdi-weli Sheekh Axmed ayaa sheegay in ay ka baqdin qaban in mooshinkii ra’iisalwasaaraha ka dhan ahaa dib loo soo celiyo taasina ay xubnaha maarlamaanka ee iminkaba labada garab u kala jabay sii kala fogeyso.
Halkan ka dhageyso Xildhiban Cabdi Barre.lite
Madaxweynaha Soomaaliya ama Muqdisho Xasan Sheekh Maxamud ayaa maalmo ka hor iibsaday Dhulkii EX Shineemo Equatore’ Numbar 4′ kaas oo ah dhul caan ah oo dadka reer Muqdisho intiisa badan yaqaanaan reerka iska leh iyo meesha oo kaga yaal Muqdisho ama beledkii berI la dhihi jiray Banaadir,wuxuuna beri ahaan jirey Shineemo caan ah oo Numbar 4 ku taal.
Warar la hubo ama laga soo xigtay dad la socda in dhulkaas Xasan Sheekh la wareegay,wuxuuna ku iibsaday lacag aan la weli ahayn cadadka ay tahay……?
Reerka iska lahaa Dhulkii EX Shineemo Equatore‘ Numbar 4’ waa reer intiisa badan qurbaha ku nool waana dhul dhaxal ah,dad ka mid ah reerkan ayaa sheegay in dhulka la iibshay mana sheegin qofka laga iibshay.
Dad ku dhow Madaxtooyada ama Xasan Sheekh oo maalmahan ay ka jiraan xusul duub siyaasadeed ayaa sheegay in Xasan Sheekh iibsaday dhul caan oo Xamar kaga yaal meel muhiim ah.
Ma ahan markii ugu horeysey oo Xasan Sheekh dhul iibsado,wuxuuna horey u iibsaday guri weyn “Qasri” oo ku yaal Turkiga.
Waxaa horey Hoteel weyn oo ka mid ah hoteelada cusub ee magaalada Muqdisho u iibsaday madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed ‘Ma rabno inaan sheegno hoteelka magaciisa’,wuxuuna maanta kaga noolyahay dibada iyo guri yar isaga iyo labadiisa xaas!.
–Xasan Sheekh Maxamud ma ku noolaan doonaa dhulkaas oo iibsaday markii oo ka dego kursiga saaran kaaraha Amisom,kana soo dhex baxo darbiga wareegsan ee Villa Somalia?
-Waxa loogu yeero beesha caalamku ma u ogolaan doonaan inow ku noolaado dhulkaas oo iibsaday.kuwaas oo horey ugu diiday kuwii ka horeeyay inay ku noolaadaan dhulka Soomaaliyeed ,waa Cabdulaahi Yuusuf iyo Shariif Sheekh Axmed?
-Amaan ma ka heli doonaa Xarakada Shabaab Mujaahidiin kuwaas oo aad u raadsha inay qaarijiyaan Xasan Sheekh,dhowrna marna u gudbay darbiga wareegsan ee Villa Somalia,wuuna ka fakaday inay qaarijiyaan, Shabaab amaan ma uga heli doona guri aysan ilaalo ka ahayn Towyaasha Amisom?
Mohamed Deeq ‘Majaango’
DHAGEYSO:-Malaaq Showri: “Xassan Sheekh hantidii uu ka dhacay ummada wuxuu u dhiibtay Shirkado ku yaala K/Afrika”
Posted on July 21, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Malaaq Cali Malaaq Showri Malaaq Colow oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in dalka Soomaaliya uu ka socdo boob aan xad lahayn kaasoo ay geysanayaan shisheeyaha iyo dowladda uu hogaamiyo Xassan Sheekh.
Malaaqa ayaa sheegay in Xassan Sheekh uu dalkan ka geystay dhac baahsan, isagoo hantida uu dhoco ku shubta shirkado ku yaala dalka K/afrika.
Sidoo kale malaaqa ayaa soo hadal qaaday fashilka amni ee dowladda iyo ciidamada shisheeye ku heysta magaalada Muqdisho iyo waxa lagu qiimeyn karo xaaladda guud ee magaalada.